Mandritra ny fitsidihana rehetra nataon’ny Filoha Andry Rajoelina mivady nanomboka hatrany amin’ny tapany avaratry ny Nosy dia tsapa sy hita porofo mivaingana fa mamim-bahoaka ny lehilahy. Mahaliana ary miantraika avy hatrany amin’ny fiainam-bahoaka ireo vinan’asa novolavolainy ka rariny sy hitsiny raha toa ka manatona azy akaiky ny vahoaka. Anisany mahavelom-bolo ny mponina amin’ny toerana rehetra izay notsidihina ny fanafoanana ny delestazy amin’ny alalan’ny fampiroboroboana ny fahazoana herinaratra mandeha amin’ny herin’ny masoandro sy rivotra, manaraka izay ny famoronana asa ho an’ny tanora.
Ankoatra ireo fandaharan’asa isan-karazany entina hanarenana an’i Madagasikara ao anatin’ ny fotoana fohy. Nitora-jofo daholo araka izany ny kianja nihaonan’i Andry Rajoelina tamin’ny vahoaka, feno hipoka avokoa izay aleha, hany ka mitabataba etsy sy eroa ireo mpanao politika tsy mahazaka vahaoka. Manaratsy sy manao izay hanemorana ny datim-pifidianana mba hitadiavana ranondranony noho ny fahatsapana fa toa tsy misy mihaino akory ireto kandidà hafa. Ny tena mahavariana aza dia betsaka amin’ireo kandida nilatsa-kofidiana no tsy fantatry ny vahoaka Malagasy akory ny fisiany hatramin’izao.
Ny fotoana anefa ity efa manakaiky hatrany. Ny vahoaka ihany koa tsy adala ka hanaiky horebirebena amin’izany fanemorana fifidianana izany intsony. Efa mahafantatra ny safidiny ny tsirairay, ka ny fotoana hanefany ny adidy masina amin’ny 7 novambra ho avy izao sisa no andrasana. Sanatria ka ireo olom-bitsy miseho ho mahay ny zavatra rehetra izao dia ekena hanakorontana ny efa milamina indray. Ny fifidianana ihany no andrandrain’ny vahoaka hivoahana amin’ ny fahantrana sy olana eto amin’ny firenena.